AMPARIBE Trano iray kila hotohoton’ny afo
Nihanahazo vahana tato ho ato ny hain-trano. Trano tafo fanitso iray indray omaly no nirehitra teny Amparibe Antananarivo, tokony ho tamin’ny 3 ora folakandro.
Tsy mbola fantatra mazava izay antony niteraka ny afo hatramin’ny fotoana nanoratanay. Nahavelom-bolo ny mponina kosa anefa na dia tao anatin’ny fahasahiranana aza izy ireo ny fahatongavan’ny sampana mpamonjy voina tao anatin’ny fotoana fohy ka voafehy vetivety ny afo, tsy niitatra teo amin’ny manodidina. Raha araka ny loharanom-baovao dia tsy tao amin’ity trano ity ny tompon-trano nandritra ny fotoana nitrangan’ny loza. Kila hotohoto ny ankamaroan’ireo entana izay tsy fantatra ihany koa ny tentim-bidiny.